नेपाल प्रहरी र मनाड. मर्स्यांग्दी बराबरीमा - The Himalayan Tribune
नेपाल प्रहरी र मनाड. मर्स्यांग्दी बराबरीमा
Posted by admin January 31 2014 खेलकुद, फूटबल , Crime News , Model Watch Print
राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरी क्लबले मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबलाई बराबरीमा रोकेको छ ।
दशरथ रङ्गशालामा बिहीबार सम्पन्न पहिलो खेलमा नेपाल प्रहरीले मनाङ मस्र्याङ्दीलाई १–१ गोलको बराबरीमा रोकेको छ । प्रतियोगितामा पहिलो अग्रता भने मनाङ मस्र्याङ्दीले लियो । खेलको पहिलो चरणको ३१ औँ मिनेटमा दीपक राईले गोल गर्दै क्लबलाई पहिलो अग्रता दिलाइदिए । अनिल गुरुङले प्रहार गरेको बललाई सुजल श्रेष्ठले मिलाइदिएपछि दीपकले गोल गरेका थिए ।
यस्तै प्रतियोगितामा मनाङ मस्र्याङ्दीको अग्रता भने लामो समयसम्म टिक्न सकेन । खेलको ६८ औँ मिनेटमा प्रहरीका भरत शाहले एक गोल फर्काउँदै खेललाई एक एक गोलको बराबरीमा ल्याएपछि मस्र्याङ्दीको पहिलो अग्रता भने विफल भयो । भरतले मनाङ मस्र्याङ्दीको ‘डिफेन्स’लाई छल्दै गोल गरेका थिए ।
सो बराबरी खेलसँगै मनाङ मस्र्याङ्दीले आफ्नो शीर्ष स्थान भने कायमै राखेको छ । दश खेल खेलेको मनाङ मस्र्याङ्दी २३ अङ्कका साथ लिगको शीर्ष स्थानमा नै छ ।
समान दश खेल खेलेको थ्रिस्टार क्लब २० अङ्कका साथ लिगको दोस्रो स्थानमा छ भने सशस्त्र प्रहरी बल ९एपिएफ० १७ अङ्कका साथ तेस्रो तथा १६ अङ्क जोडेको मच्छिन्द्र क्लब चौथो स्थानमा छन् । यसैगरी समान दश खेल खेलेको प्रहरी १६ अङ्कका साथ गोलअन्तरका आधारमा लिगको पाँचौँ स्थानमा छ ।
बिहीबारको बराबरी खेलले थ्रिस्टार क्लबलाई भने केही फाइदा पुगेको छ । मनाङ मस्र्याङ्दीले जितेको भए थ्रिस्टार र मनाङ मस्र्याङ्दीको अङ्कमा निकै अन्तर हुने थियो । अब थ्रिस्टारभन्दा मनाङ मर्स्याङ्दी ३ अङ्कले मात्र अगाडि छ ।